MM Abiy Ahimad: Waraanni nu haa gahu kan jenneef, kan Ertiraa, Somaaliyaa ture Wallagga akka dhufuuf miti - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright OFFICE OF PM, ETHIOPIA
Waraanni dhiheenya daangaa Ertiraa irraa gara biraatti socho'aa ture ummataan dhaabsifamuun isaa sirrii hin turre jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa.
Abiy Ahimad Sambata darbe barsiisota kuma sadii ol tahan waliin waajjira Ministira Mummeetti dhimmoota baruufi barsiisuu irratti mari'ataniiru. Dabalataanis, dhimma wayitaawaa irratti gaaffilee barsiisonni gaafatanif deebisaniiru.
Dhimmi miindaa xiqqaachuu dhaabbilee Itoophiyaa mara keessatti gaaffii ta'uu kan kaasan MM Abiy, Ministeerri Barnootaa qorannoo taasisee waajjira MMf akka gabaasa dhiheessu kallattiin kennameeraaf jedhaniiru.
Haa ta'u malee, ''Qorannoon taasifame osoo miindaan isiniif dabalamerree, fedhii keessaniifi waan isiniif malu kennuu hin dandeenyu,'' jechuun hirmaattotaaf himaniiru.
Kanaafuu, biyyi rakkoo dinagdee keessa osoo jirtuu, isuma jirtu waan jiru qooddachuumoo obsanii bu'uura dhaloota borii ijaaruu wayya jechuun hirmaattota gaafataniiru.
Mootummaan filannoo dimookiraatawaa gaggeessuuf qophii ta'uufi bulchiinsi isaanii yoo milkaa'uu dhabef karaa nagaatin bakka gadhiisna jechuun irra deebiin mirkaneessaniiru.
...seera jijjiirree bakka jiranitti dubbifnee kadhannee fidne waraanamuu hin qabnu. Kuni sirrii miti,
Abiy Ahimad, Ministira Muummee
Haa ta'u malee, paartilee morkattuu yeroo gabaabaa keessatti aangoo argachuu fedhu jedhan qeeqaniiru.
''Itoophiyaa keessa mootummaa tokko qofatu jira. Mootummaa ani gaggeessu. Yoo xiqqaate waggaa 1fi walakkaaf.
''Isa dura garuu, ji'a sadii, ji'a shaniin mootummaa nan ta'a abjuun jedhu garuu Itoophiyaa keessa hin hojjetu,'' jechuu isaanii hordofee hirmaattonni walitti aansani harka rukutaniiruuf.
Dhimmoonni sirrii hin taane raawwataa jiru jedhani kaasan keessaa tokko wanta Lixa Oromiyaatti ta'aa jirudha.
Akeeka hoggantoota ABO'f dubbatamen fakkaatun, kanneen waggaa dheeraaf qabsaa'an ''seera jijjiirree bakka jiranitti dubbifnee kadhannee fidne waraanamuu hin qabnu. Kuni sirrii miti,'' jedhaniiru.
''Waraanni nu haa gahu kan jenneef, waraanni Ertiraa, Somaaliyaa ture Wallagga akka dhufuf miti.''
''Mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irree ta'uf fiixeerra gaheera.'' Nuyi Itoophiyaaf dimookiraasiin barbaachisa jennee osoo waan meeqa taanu wanta baay'ee obsineerra jechuun dubbataniiru.
Ajajaan WBO Lixaa maal jedha?
Turtii Obbo Galaasaa Dilboo waliin taasifne
Wallaggatti ji'oota sadan afran rakkoon dhalatus, ''marii malee waldhabdeetti hin seenne'' kan jedhan Ministirri Muummee, paartiin morkataa kamiyyuu kilaashii lafa kaa'e karaa nagaan akka qabsaa'u waamicha dhiheessaniiru.
'Mootummaan hin laaffanne'
Rakkoo nageenyaa asiifi achi dhalatu mootummaan to'achuu dhabeera jedhanii, yeroo adda addaatti mootummaan laaffateera kan jedhan sirrii miti jedhu MM.
''Ji'a tokkoofi lama darbe waa'ee Itoophiyaa fi jijjiirama Itoophiyaa addunyaan waan jedhe, waggoota 20 darbe jechuu dhiisuu danda'a.
''Hidhamuu, reebamu namoonni barre mootummaan waan sana dhiiseef waan dadhabe yoo nutti fakkaate dogongorreerra,'' jedhaniiru.
Reebichaafi hidhaa waan nu hin barbachifneef itti dhiifne kan jedhan Abiy Ahimad, ''Mootummaa ta'u(keenya) immoo addunyaan nu mirkaneesse. Sagalee tokkoon,'' jedhaniiru.
Gaaffii aanaa, naannoo ta'uu
Yeroo adda addaatti, keessumaa erga Ministirri Muummee Abiy Ahimad aangootti dhufani as, keessumaa gama Kibba biyyattii gaaffiin Aanaa, Godina, Naannoo haa taanu cimeera.
Gaaffiin kuni maaliif ka'e kan jedhu hubachuuf mootummaan komishinii qorannoo taasisu hundesseera jedhan.
Sababa kanaaf, ''Hanga qorannoon suni taasifamutti gaaffii homaayyuu hin fudhannu,'' jechuun deebii kennaniiru. Sababni isaa furmaata waaraa kennuuf akka tahe himaniiru.
Waraana karaatti danqame
Waraanni daangaa Ertiraa irraa dhiheenya socho'e ''yaaddoo waan itti tahef'' jiraattonni Kaaba Tigraay naannoo Fitsaa jedhamutti waraana imalu danqanii turan.
Kunis, daangaa Zaalaambassaa dhiheenya cufame hordofeeti. Haa ta'u malee, MM akka jedhanitti kanaan dura yeroo daangaan banamu leenjiif akka socho'an himeen ture jechuun dubbataniiru.
Raayyaan ittisaa daangaa Zaalaambassaarraa akka turuuf 'waliigalame'
Waan amma tahaa jiru waliin homaa hidhata hin qabu kan jedhan Abiy Ahimad, imalli waraanaa danqamu isaa garuu qeeqaniiru.
''Yaaddoo qaban mootummaatti ibsuun danda'ama. Garuu, imala Rayyaa Ittisaa danquun sirrii miti. Waldhabdeen dhalatee namni du'uu danda'a ture,'' jechuun dubbataniiru.
''Ummanni Itoophiyaa eessa jirullee kana baruu qabu, mootummaan federaalaa waraana bakkaa bakkatti sochoosuuf aangoo guutuu qaba. Gorsi eenyuyyu hin barbaachisun.''
Kanumaan walqabatee ''Naannoo Tigraayitti yakkamtoonni 10 20 fi 30 waan jiranif,'' haalli miidiyaaleen gabaasan dubbii hammeessaa jira jechuun akka sirraa'u gaafataniiru.
Ummanni Tigraay ummata waggaa dheeraaf biyyaaf jedhee qabsaa'e akka tahe dubbataniiru.
'Itoophiyaan hin diigamtu'
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad rakkoon yaaddessaa hedduullee jiraatu biyyattin salphaatti waan diigamtu miti jedhu.
''Mootichi Miniliik bara dhukkubsataniiru jedhame sana mootummaanillee dhabamu biyyi hin diigamne. Mootichi H/Sillaasee Xaaliyaaniin yeroo dhufe biyyaa bahani hanga deebi'anitti biyyi hin diigamne.
MM Mallas dhukkubsatani achis darbe hanga owwaalamanitti biyyi hin diigamne. Isaan ji'ootaaf hin turre. Obbo H/maariyaam Dassaalany gadlakkisanii guyyoota 45 mootummaan hin turre, garuu biyyi hin diigamne,'' jedhaniiru.
Biyyattii dhaanni biyya bulchuus tahe mootummaan hin dhaabne kan jedhan Ministirri Muummee, Itoophiyaan takkaattis hin jigdu, takkaattis hin ijaaramtu, yeroo fudhata jedhaniiru.